Manchester City Oo U Bandhigtey Ronaldo Lacag Dhan €200m Iyo Mushaar Dhan €20m Sanadkii - jornalizem
Manchester City Oo U Bandhigtey Ronaldo Lacag Dhan €200m Iyo Mushaar Dhan €20m Sanadkii
Kooxda Manchester City ayaa waxa ay diyaar ula tahay Cristiano Ronaldo inay ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan leh dunida, iyagoo siinaya €20m halkii xilli ciyaareed bisha Janaayo sida ay daabacday AS.
Kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa la sheegay inay u bandhigtey kooxda Real Madrid lacag dhan €200m xaggaagan balse kooxda Real ayaa diiday.
Milkiilaha City Sheikh Mansuur ayaa la sheegay in ay ka go’an tahay inuu mar uun keeno weeraryahanka Real Madrid garoonka Etihad Stadium waxaana la filayaa in bisha Janaayo uu u bandhigo dalab kooxda Real Madrid.
Ronaldo ayaa waxa uu Axadii aynu soo dhaafnay sheegay in ay murug ku haysato kooxda Real Madrid kooxdiisana ay og tahay sababta, waxaana isa soo taraya wararka ka hadlaya mustaqbalka kooxda.
Wararka qaar ayaa tilmaamaya in uusan Ronaldo ku faraxsanayn qaabka Los Blancos ay ula dhaqmeen ciyaaryahanka ay sida weyn saaxibada u yihiin ee Kaka, halka warar kalana ay sheegayaan in 27jirkan uu ciyaarayo qaab heshiis cusub oo lacag badan lagu siiyo uu ula geli lahaa Real Madrid.
Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Man City mid kamid ah kulamada ugu horeeya ee Championka League iyadoo kooxda Roberto Mancini ay u safri doonaan Bernabeu 18 September halka kulanka kalana uu dhici doono 21 November